Jaaliyada Soomaalida ee Magaalada Johannesburg oo kulan la qaatay Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka”Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Jaaliyada Soomaalida ee Magaalada Johannesburg oo kulan la qaatay Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka”Sawirro”
Johannesburg(SONNA)-Kulankaan oo ahaa mid casho ah ayaa qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka iyo ganacsatada Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg waxaa ay hotelka nuura kula qaateen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo howlo shaqo todobaadkaan u joogay dalka Koofur Africa.
Kulanka oo ay soo agaasintay safaarada Soomaaliya ay ku leedahay dalka South Africa ayaa ujeedkiisa ahaa in waxgaradka jaaliyada Soomaalida ee magaalada Johannesburg iyo xogyaha guud ay is waydaarsadaan xogta xaalada dalkii hooyo ee Soomaaliya iyo tan dalka South Africa oo ay marti ku yihiin.
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali daahir ayaa sheegay in socdaalkiisa dalka Koofur Africa uu ahaa mid looga hadlayay arimo ay ku jiraan sidii ay ku heli lahaayeen Soomaalida ku nool South Africa xaquuq buuxda isla markaana loo yareyn lahaa dhibaatooyinka Loo geysto.
SONNA-C/laahi Maxamuud Amiin.C/laahi Qorshe.
Previous articleMadaxweynaha Hirshabelle Oo Jowhar Kulan Kula Qaatay AMISOM”Sawirro”
Next articleMadaxweyne Farmaajo“Waxa ay ogaandoonaan in shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin geesiyaal deg deg uga jawaaba dhibaata kasta”Sawirro”